I-Wuxi Innovate Machinery Development Co., Ltd yasungulwa ngo-2010 futhi itholakala eWuxi, idolobha elihle eceleni kweTaihu Lake.Siyibhizinisi lobuchwepheshe be-hi-tech elihlanganiswe yi-R & D, ukukhiqiza, ukusabalalisa kanye nezinsizakalo ezihlobene, ezisebenza ngokuklama, ukukhiqiza kanye nokufakwa kwemishini yezimonyo, yezokwelapha, ukudla, izimboni zamakhemikhali amahle, njll.
Ngesisekelo sokuzuza njengefa indabuko yemishini yamakhemikhali yokukhiqiza, sinaka kakhulu ukuthuthuka, ukuqamba kanye nokuthuthuka kobuchwepheshe.Asisenelisekanga ngomkhiqizo owodwa, sigxila kumiklamo engajwayelekile nemigqa ephelele yokukhiqiza.Singanikeza izixazululo eziphelele amaklayenti ethu, kufaka phakathi ukwakhiwa, ukwenziwa nokufakwa kolayini bezinqubo zezinqubo kusuka ekulungiseleleni kuya ekupakisheni.
Izixhobo zethu zikhiqizwa ngaphansi kwe-IS09001: 2008 standard standard system system, yonke imikhiqizo izuze amazinga wekhwalithi ye-GMP, imikhiqizo eminingi iqinisekiswe yi-CE.
Ngobuchwepheshe obusha, ukwenziwa okuphelele nezinsizakalo ezijwayelekile, inkampani yethu yaziswa kahle ngamakhasimende ethu. Uhlelo lokuphatha ikhwalithi / imvelo / ukuphepha luhlinzeka ngemvelaphi eqinile yokuthuthuka kwemakethe, ehlanganisa wonke amakhasimende ethu ukujabulela imikhiqizo nezinsizakalo zethu ezisezingeni eliphakeme.
Imikhiqizo yethu isetshenziswe ezimbonini eziningi futhi ikhonza amakhasimende emazweni amaningi emhlabeni jikelele.
Njenge-SME ehamba phambili kwezobuchwepheshe (ibhizinisi elincane neliphakathi) eliqinisekisiwe nguhulumeni weSifundazwe saseJiangsu, singaphansi kokukhula okungaguquki, nokuthuthuka, sethula ama-telents ezesayensi nezobuchwepheshe kanye nemishini ephezulu yokwenza imikhiqizo yethu iphelele. Masikhule futhi sithuthuke ngokubambisana, sakhe isimo sokuwina futhi sibambe iqhaza enkampanini nasemphakathini!
Siye sagcizelela njalo ekuveleni kwezixazululo, sachitha imali enhle kanye nabasebenzi ekuthuthukiseni ubuchwepheshe, futhi senza lula ukukhiqizwa kokukhiqiza, ukuhlangabezana nezidingo zamathemba avela kuwo wonke amazwe nezifunda.
Isiko lethu: Ukuqamba, Ubuqotho, Ukulethwa, Ubuqotho